Ogaden News Agency (ONA) – Kenya oo Iskaga Baxday Saldhig Ay Soomaaliya Ku Lahayd.
Kenya oo Iskaga Baxday Saldhig Ay Soomaaliya Ku Lahayd.
Posted by Dayr	/ March 3, 2019
Ciidanka Kenya ee ku sugan gobolka Gedo ee Soomaaliya ayaa shalay faarujiyay mid kamid ah saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee ay ka degenaayeen gobolkaasi.
Ciidamadan ku jooga magaca howlgalka AMISOM ayaa la sheegay in ay gabi ahaanba faarujiyeen saldhig ay ka degenaayeen deegaanka Faxfax Dhuun ee gobolka Gedo sida ay ku warameen warbaahinta dalkaasi. Isgaadhsiinta deegaankaas ayaa hawada laga saaray ka hor inta aysan ciidanka Kenya ka bixin saldhiga deegaanka Fax Fax dhuun.
Lama oga halka ay u ruqaansadeen ciidankan ka baxay saldhiga ay ka degenaayeen deegaanka faxFax Dhuun balse warar soo baxay waxa ay sheegayaan in ciidamadan Kenyan-ka ah ay fariisimo cusub ka sameysteen deegaano kale oo ku yaala gobolkaasi.
Masuuliyiinta dalka Kenya ayaanan Ka warbixin ka bixitaanka ciidankooda ee saldhiga Fax Fax dhuun hase ahaatee saraakiisha ciidamada dowlada ee gobolka Gedo ayaa ku waramaya in aysan jirin duulaan ama baqdin amni oo ciidamadan ay uga baxeen saldhigii ay ka degenaayeen gobolkaasi.
Si kastaba dadka falanqeeya siyaasada ayaa aaminsan in ka bixitaanka ciidanka Kenya ee deegaanka Fax Fax dhuun e gobolka Gedo loo aaneyn karo xiisadda diblomaasiyadeed ee xiligan ka dhex aloosan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya maadama dowlada Kenya ay horey ku goodisay in soo rogeyso cunaqabateyn nooc kasta ah oo ka dhan Soomaaliya.